ကုထုံးပံ့ပိုးမှု - Come4Buy eShop
$ 9.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ - $ 60.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
မှာစတင်ခြင်း $ 13.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
အဆစ်အမြစ်ရောင်ခြင်း လက်အိတ် အဆစ်အမြစ်ရောင်ခြင်း လက်ဖြင့် ကုထုံး လက်ကောက်ဝတ် လက်လက် ပံ့ပိုးလက်အိတ် Silicone Gel အဆစ်အမြစ်ရောင်ခြင်း ဗီဒီယိုဂိမ်းများသည် လူတိုင်း၏ဘဝ၏ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်နေပါပြီ။ ဂိမ်းကစားနေစဉ်တွင် အလွန်အကျွံပါဝင်မှု...
1PCS ။ 2PCS ။ ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
မှာစတင်ခြင်း $ 23.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
ကုထုံးနောက်ကျောခါးထောက်သည့်ခါးပတ် Lumbar Brace 2. လေဝင်လေထွက်ကောင်းပြီး လေဝင်လေထွက်ကောင်းသော elastic side panels ။ ခါးနာခြင်း ကျောရိုးအကြောပြတ်ခြင်း ၊ sciatica...
L-109cm M-105 စင်တီမီတာ XL-113 စင်တီမီတာ XXL-125 စင်တီမီတာ XXXL-၁၇၅ စင်တီမီတာ XXXXL-145cm ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
Arch Support Shoe ခြေထောက်ထည့်ပါ...
$ 14.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ $ 18.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
ကုထုံးပံ့ပိုးမှု ကုထုံးပံ့ပိုးမှု - Arch Support Shoe Foot Pads များထည့်သွင်းခြင်း။ ဂျယ်လ်ဖိနပ် insole ထည့်သွင်းမှုများသည် ပြင်ပလူများအတွက် အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို ပွဲလမ်းသဘင်များတွင်ပင် ဝတ်ဆင်နိုင်ပါသည်။ သူတို့...
အဖြူ အဝါနုရောင်ရှိသော ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
အားကစား Kneepad ဖိအား Elastic ဒူး...
$ 14.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ $ 22.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
ဒူးအားသန်မာစေသော လေ့ကျင့်ခန်းများ ပတ်တီးယက်ခြင်း ဒူးဆစ်ကြိုးသည် သင်၏နေ့စဉ် ကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှုနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းများအတွက် သင့်လျော်သည်။ ၎င်းသည် သင်၏ကြံ့ခိုင်မှုစွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ရန် သို့မဟုတ် အဆစ်နာခြင်းမှ ကြီးကြီးမားမားသက်သာရာရစေရန်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်...
အစိမ်းရောင် / L ကို အစိမ်းရောင် / M က အစိမ်းရောင် / S က အစိမ်းရောင် / XL အစိမ်းရောင် / XXL Black က / L ကို Black က / M က Black က / S က Black က / XL Black က / XXL လိမ္မော်ရောင် / L ကို လိမ္မော်ရောင် / M က လိမ္မော်ရောင် / S က လိမ္မော်ရောင် / XL လိမ္မော်ရောင် / XXL ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
မှာစတင်ခြင်း $ 14.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
Bunion Corrector Valgus Corrector Orthopedic Toe Separator Bunion Corrector Relief Bunion Corrector Relief သည် အူမကြီးကိုကာကွယ်ပေးကာ ခြေချောင်းကြီးများ၏နာကျင်မှုကို သက်သာစေသည်၊ နူးညံ့သောပစ္စည်းသည် ခြေချောင်းများနှင့် ဖိနပ်ကြားပွတ်တိုက်မှုကို လျှော့ချပေးသည်၊ အရိုးကို သက်သာစေသည်...
1 SET2SETT ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
Hammer Toe Straightener အမျိုးအစား- အရိုးသုံးပစ္စည်း အမျိုးအစား- ပစ္စည်းအမျိုးအစား- Foot Care ToolPower Source: None ElectricModel Number: Toe CorrectorMaterial: EVA + Cotton And Elastic Loop with Foam Pad
ခြေချောင်းတစ်ချောင်း ခြေနှစ်ချောင်း ဘယ်ခြေချောင်းသုံးချောင်း ညာခြေသုံးချောင်း ဘယ်ဘက်သတ်မှတ် ညာဘက်သတ်မှတ် ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
Bunion Corrector Relief သည် သင်၏...
$ 13.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ $ 17.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
ခြေထောက် Bunion Corrector သက်သာရာ၏ အပြင်ဘက်တွင် Bunion။ လက်မနှင့် အခြားလက်ချောင်းများကို ထိရောက်စွာ ခွဲထုတ်ပါ၊ ထပ်ခြင်းမပြုရန်၊ မညှစ်ဘဲ၊ ခြေချောင်းများကို ဖြီးပါ- သင်၏နာကျင်မှုကို သက်သာစေရန်၊ သင့်ပေါင်များကို ကုသပါ၊ လျှော့ချပါ...
အဖြူ အသားအရေ ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
ခြေဖဝါးကွဲအက်ခြင်းကိုကာကွယ်ပါ ခြေထောက်ကွဲအက်ခြင်းကိုကာကွယ်ပါ။ ခြေဖဝါး ၁ စုံ ဂရုစိုက်ပါ အရေပြားကို အခွံခွာခြင်းနှင့် ကွဲအက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒေါက်ဖိနပ်များသည် တစ်ကိုယ်လုံး၏ အလေးချိန်ကို အထောက်အကူပြုပြီး မကြာခဏ တက်ကြွနေရပါမည်။
ကုထုံး Brace ပခုံးနောက်ကျောပံ့ပိုးမှု ...
$ 16.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ $ 23.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်များ- Back support brace သည် သင့်ကြွက်သားများနှင့် ကျောရိုးများကို သဘာဝအတိုင်း လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လေ့ကျင့်ပေးခြင်းဖြင့် အလုပ်လုပ်သည်၊ သင့်နောက်ကျောနှင့် ပခုံးတို့၏ ကိုယ်ဟန်အနေအထားကို ပြုပြင်ပေးကာ သင့်ကိုဖြစ်စေသည်...
Beige သ / L ကို Beige သ / M က Beige သ / S က Beige သ / XL Beige သ / XXL Black က / L ကို Black က / M က Black က / S က Black က / XL Black က / XXL အဖြူ / L ကို အဖြူ / M က အဖြူ / S က အဖြူ / XL အဖြူ / XXL ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
Ankle Braces ဘတ်စကက်ဘော ပျော့ပျောင်းမှု အခမဲ့...
Ankle Braces Ankle Braces ဘတ်စကက်ဘော ပျော့ပျောင်းမှု အခမဲ့ ချိန်ညှိမှု အကာအကွယ် ခြေထောက်ပတ်တီး အကြောအောင့်ခြင်း ကာကွယ်ခြင်း အားကစား ကြံ့ခိုင်ရေး တီးဝိုင်း ပစ္စည်း : နိုင်လွန် polyester ထုတ်ကုန်အမည် : ခြေကျင်းဝတ် BraceColor : BlackWeight : About 40gPackage List : 1Pcs* Ankle Support...
ညာ/L ညာ/အမ် အခွင့်အရေး ညာဘက် / XL ဝဲ/ဝဲ ဝဲ/အမ် ဝဲ/S ဘယ် / XL ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
Fingerless Arthritis လက်အိတ် ကုထုံး Compression...
$ 19.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ $ 33.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
Rheumatoid Arthritis Arthritis Gloves ကုထုံး Compression Gloves Non-slip Full Finger Joint Gloves Copper Fiber Pressure Gloves Copper Fiber Copper Ion Antibacterial Deodorant Gloves .Fingerless Arthritis Gloves Therapy Compression Gloves ကြေးနီ...
M L S ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
မှာစတင်ခြင်း $ 25.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
သားအိမ်ခေါင်း ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို သက်သာရာရစေမည့် 3D Intelligent Fit Technology Electric Pulse Massage Electrode Patch Circular Traction Floating Magnetic Effect Built-in Magnetic Stones 360° အသိဉာဏ်ရှိသော ရေပေါ်သံလိုက်ကုထုံးဖြင့် သင့်အား နှိပ်နယ်ပေး...
သေတ္တာနှင့်အတူ သေတ္တာမပါဘဲ ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ